पत्नीलाई सम्झिएर बेस्सरी रोएपछि…अचानक प्लेन ल्यान्डिङ:: Naya Nepal
पत्नीको याद एक व्यक्तिलाई यसरी आयो की उडिरहेको हवाईजहाज नै इमरजेन्सि ल्याडिङ गर्नुपर्यो। पत्नीको यादमा ती व्यक्ति उफ्री उफ्री रोइरहेका थिए । त्यसकारण उडिरहेको हवाई जहाज तुरुन्त ल्यान्डिङ गर्नुपर्यो ।पाकिस्तानी समाचारका अनुसार यी व्यक्तिको नाम इरफान हाकिम अली हो । रिपोर्टको अनुसार इरफानको केही समय पहिले विवाह भएको थियो । उनी कामको लागि साउदी अरबमा जादै थिए, तर उनले पत्नीलाई भने घरमै छाडेका थिए ।भर्खर विवाह गरेकी पत्नीलाई घरमा छाडेर इरफान कामको लागि साउदी जान शाहीन फ्लाइटमा बसेका थिए । फ्लाइट रवाना लाहौर एयरपोर्टबाट उडान भरेर धेरै अगाडी बढिसकेको थियो । त्यसै क्रममा अलीले पत्नीलाई यसरी सम्झिएकी घर फर्कने बहाना सोच्न थाले ।
उनी आफ्नो सिटबाट उठेर जोर जोरले रुन थाले । फ्लाइटका कर्मचारीले सोध्दा उनले पत्नीको मृत्यु भएकोले घर फर्कन आवश्यक भएको बताए । उनलाई धेरै सम्झाउदा पनि मानेनन् र आखिरमा आधा बाटो पुगेको जहाज लाहोर एयरपोर्टमा फर्काउन पर्यो ।एयरपोर्टमा फेरी पनि उनलाई सोधपुछ गरियो तब बल्ल सत्य कुरा बोले र भने, पत्नीको माया लागेर घर फर्कने बहाना गरेको । इरफानलाई पत्निप्रति एक पतिले गरेको चोखो माया देखेर कसैले पनि कारवाही गर्न सकेनन् ।
मरेको केटीको आत्माले छिमेकीलाई भन्यो, ‘मलाई घरभित्र गाडिएको छ बाहिर निकाल्नु’
हाम्रो समाज धेरै अगाडी बढिसकेको छ । मानिसहरु अन्धविश्वासलाई मान्न तयार छैनौ तर पनि कहिलेकाँही विश्वास गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छन् जसले हामीलाई अप्रत्यक्ष रुपमा असर गर्छ ।त्यस्तै भारतको फरिदाबादको सन्तोष नगरमा एक घटना भएको छ । एक नाबालिका बच्चीको कंकाल उनकै घरबाट प्रहरीले बरामद गरेको छ । डेढ वर्ष पहिले आत्महत्या गरेकी बच्चीको शव परिवारले घरभित्र नै खाल्डो खनेर गाडेको थियो ।परिवारले डेढ वर्ष पहिले नै घरभित्र गाडेको मिडियाहरुले बताएका छन् । पहिल्यै भएको घटनालाई छिमेकीहरुले प्रहरीलाई हाल मात्र बताइदिएका छन् । छिमेकीहरुले बच्चीको छाया देखेर पछिल्लो डेढ वर्षदेखि डराइरहेका थिए ।
‘मलाई घरभित्र नै मेरो बाबुले गाडिदिएका छन्, मलाई बाहिर निकाल्नु ।’ बच्चीको आत्माले भनेपछि छिमेकीहरु प्रहरीको सहायता लिन पुगेका हुन् । जानकारी पाएलगत्तै प्रहरी पुग्यो घर भित्रको कोठामा खन्न थाल्यो । जहाँ बच्चीको कंकाल भेटियो । प्रहरीले कंकालको पोस्टमार्टमको लागि अस्पताल पठाएको छ ।प्रहरीको अनुसार बच्चीले आत्महत्या गरेकी थिइन् । सुरुवातमा आत्महत्या गरेको भनिएपनि घर परिवारले घरभित्रै गाड्नुको कारण भने रहस्यमय भन्दै प्रहरीले छानबिन गरीरहेको छ ।
चुनौतीको पहाडमा अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मा लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा पनि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेर सफल मानिएका पौडेलले फेरि देशको ढुकुटी हेर्ने जिम्मेवारी पाएपछि सर्वत्र चासो बढेको छ ।पौडेल पहिलोपटक नौ महिना अर्थमन्त्री हुँदा देशमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो । अहिले कोरोना महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त भएको अवस्थामा ढुकुटी जिम्मा लिन पुगेका पौडेलले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने छ ।
सफल मानिएको पहिलो कार्यकाल
पाँच वर्षअघि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अत्यन्त न्युन भएका बेला अर्थमन्त्रीका रूपमा पौडेलको कार्यकालमा देशमा पहिलोपटक ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो । पौडेलले लिएका केही नीति र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भएको उल्लेख्य प्रगतिका कारण उनको छोटो कार्यकालमा उच्च आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।पौडेलले मासिक एक हजार रुपैयाँ रहेको वृद्धभत्ता बढाएर दोब्बर बनाएका थिए । कर्मचारीको तलब पनि उल्लेख्यरूपमा वृद्धि गरेका थिए । अहिले दोस्रोपटक अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व पाएका पौडेलको काँधमा कोरोनाका कारण धराशायी हुन लागेको अर्थतन्त्र उकास्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अहिले अर्थतन्त्र शिथिल बनेको छ । विश्व बैँकले सन् २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.६ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरेको छ । अहिले सरकारी खातामा एक खर्ब ९६ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ नगद मौज्दात छ । कुनै बेला घाटामा पुगेको शोधानान्तर स्थिति अहिले ५१ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ बचतमा छ ।अर्कोतर्फ, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआइ) घटेको छ । एफडिआइ गत आर्थिक वर्षको तुलनामा तीन प्रतिशतले घटेर एक अर्ब ३९ करोड रूपैयाँमा सीमित छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गरेका पौडेलका सामु चुनौतीको पहाड खडा छ ।अहिलेसम्म दुई खर्ब १९ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता आएको छ । निःशर्त अनुदान एक खर्बभन्दा बढी छ । चुनौतीका बीच अर्थमन्त्रालयमा थप कार्य कुशलता प्रामाणित गर्ने अवसर पनि पौडेललाई छ ।
आशा गर्ने ठाउँ
पौडेलले अर्थमन्त्रीका रूपमा पहिलो नौ महिने कार्यकालमा निजी क्षेत्रमैत्री छवि बनाए । अहिले पनि उनी कोरोनाले थिलथिलो बनाएको व्यावसायिक क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु पर्नेछ । यसअघिको कार्यशैलीका कारण उनले निजी क्षेत्रबाट विश्वास हासिल गर्ने सम्भावना पनि पर्याप्त छ ।निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल भन्छन्, ‘स्वाभाविकरूपमा अर्थमन्त्रीसँग हाम्रो अपेक्षा हुन्छ । कोरोना महामारीका कारण ७ महिनादेखि सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि निष्क्रिय छ । निजी क्षेत्र धराशायी भएको छ । निजी क्षेत्रको विश्लेषणअनुसार आर्थिक वृद्धि माइनसमा जानेजस्तो देखिएको छ । यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा जिम्मेवारी वहन गर्नु सजिलो छैन ।’यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको उत्थान गर्ने विषयमा अर्थमन्त्री पौडेलसँग अपेक्षा रहेको अग्रवालले बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको अपेक्षा अर्थतन्त्रको उत्थान हो । एकीकृत लगानी हुनेगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पूँजी लगानी गर्ने अहिलेको अवस्था होइन । यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । वितरणमुखी नभई कठोरता अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।’अर्थविद डा. गोविन्द नेपाल अहिलेको आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेकोले अर्थतन्त्र उकास्न राहतका प्याकेजहरू आए पनि पूर्णता दिन थप काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘केही स्टिमुलस प्याकेजहरू आएका छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर थप प्याकेजसमेत आवश्यक छ ।’अहिले सरकारी खर्च बढिरहेको छ तर राजस्व संकलनमा संकुचन आएको छ । नेपालले भने, ‘राजस्व संकुचनको अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा सम्झौता भइसकेका र नेपाल आउने क्रममा रहेका वैदेशिक सहयोगका आयोजनाहरू अघि बढाउनुपर्ने दायित्व अर्थमन्त्रीकै हुन्छ । यसअघिको उहाँको कार्यशैली हेर्दा फेरि पनि सफल हुने आशा गर्न सकिन्छ ।’
कुशल राजनीतिक नेतृत्व
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकता हुनुपूर्व पौडेल नेकपा एमालेको उपमहासचिव थिए । तत्कालीन एमालेको आन्तरिक राजनीतिक समीकरण सन्तुलनमा कुशल मानिएका पौडेल एकीकरणपछिको नेकपाको महासचिवका रूपमा समेत सफल मानिएका छन् ।पार्टीका दुई अध्यक्षबीच चर्को ध्रुवीकरण हुँदा महासचिव पौडेलकै समन्वय र राजनीतिक कुशलताका कारण नेकपा विभाजनबाट जोगिएको भन्नेहरू पनि नेकपाभित्र छन् । प्रधानमन्त्री तथा अध्यष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाल दुबैको विश्वास जित्न सकेका कारणले पनि पौडेल आन्तरिक राजनीतिमा सबल देखिएका छन् ।
पाँच वर्षमा फेरि अर्थमन्त्रालयमा
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठन भएको सरकारमा पौडेलले अनायासै अर्थमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी पाए । धेरैले उनी कमजोर अर्थमन्त्री हुन सक्ने अनुमान गरेका भए पनि यस विपरीत सफलता हासिल गरे ।निर्वाचनपछि बनेको एकल बहुमतयुक्त शक्तिशाली सरकारमा प्रधानमन्त्री ओलीले जानेमानेका अर्थविद् डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रालय जिम्मा लगाए । संघीय संसदको सांसदका रूपमा दुई वर्षे कार्यकालपछि गैरसांसदका रूपमा पनि खतिवाडले नै जिम्मेवारी पाए । फेरि सांसद हुन नसकेपछि उनी स्वतः मन्त्री पदबाट बाहिरिए ।
यसपछि ४० दिन आफ्नै जिम्मेवारीमा राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले दोहोर्‍याएर पौडेललाई अर्थ मन्त्रालय जिम्मा लगाएका छन् ।जानेमानेका अर्थविद् भए पनि खतिवडाको नीति र कार्यशली नेकपाभित्र आलोचित थियो । अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व राजनीतिक नै हुनुपर्छ भन्ने आवाज बलियो हुँदै गएको थियो । सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यो अवाजमा दम अनुभव गरे ।हुन पनि राष्ट्र बैंकमा जागिर गरेका, राष्ट्रिय योजना आयोगमा दुई पटक उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरेका डा. खतिवडामाथि प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वास अनपेक्षित पनि थिएन ।अब पौडेलले चाल्ने कदमले देशको अर्थतन्त्रको भविष्य निर्धारण हुँदै जानेछ । र, साँच्चै अर्थमन्त्रालयमा अर्थविद्को कि राजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्व उचित भन्ने दिशा पनि निर्धारित हुनेछ ।